Uchungechunge lwe-1870 Dragon® Dredge - i-Ellicott Dredges
I-Series 1870 Dragon® cutterhead dredge iyisikali esiphakathi nendawo esikhulu esilinganisweni esinezinto ezihlukile zokudonsela phansi esinika amandla ukumba okuphumelela kakhulu okuqala ekujuleni kwe-5 ft (1.5 m). Ngaphezu kwalokho, le cutter suction dredge iqukethe ipompo yokudonswa kanye nezinsiza, ezinikwa amandla yizinjini ezimbili ezizimele zokukhiqiza okuphezulu ngaphakathi kwebanga lonke lokusebenza.
Le modeli ijwayele ukusetshenziselwa izinhlelo ezinjengokudonswa kwemifula, ukubuyiselwa kolwandle, ukubuyiselwa komhlaba, ukwakha iziqhingi nokulawulwa kwezikhukhula.
I-1870 DREDGE ADVANTAGES
Ngobude obuholela phambili embonini yonke, i-1870 inikeza ububanzi obukhulu be-swing yokukhiqiza okuthuthukile ngehora lokudonsa.
Yakhiwe ngemiklamo emangelengele eqinisekisiwe yesikhathi sika-Ellicott nohlelo lwendabuko lokulawula i-electro-hydraulic, i-1870 iyindawo ethandwayo yezimo ezikude nezishisayo.
Ububanzi obugcwele bezinketho ezijwayelekile ezitholakalayo, kufaka phakathi amasistimu wokubeka asuselwa ku-GPS.
Usayizi Wokukhishwa: 20 ″ x 20 ″ (500 mm x 500 mm)
Injini Eyinhloko Isibungu 3512: 1,280 HP (955 kW)
Injini Esizayo Injini C-15: 475 HP (354 kW)
Amandla @ Isinqe seDrayivu: 250 HP (186 kW)
Ubuningi Bokudonswa Okukhulu: 50 '(15 m)
Isoftware yokulandela umkhondo ye-Dredge GPS
Mast ngezimpawu zokuzulazula
Ukukhishwa kwe-elbow swivel
Ihange booms noma inqola ye-spud